WAR DEG DEG AH: Xildhibaan Xidig oo goor dhaw ku dhawaaqay war xasaasi, daahana ka rogay | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
WAR DEG DEG AH: Xildhibaan Xidig oo goor dhaw ku dhawaaqay war xasaasi, daahana ka rogay
MUQDISHO(P-TIMES)- Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ay Xildhibaano kamid ah baarlamaanka SOomaaliya u doorteen Gudoomiye kudlad ay sameysteen ayaa kaga dhawaaqay Muqdisho in aysan waxba mucaarad ah ku aheyn dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Mr, Xidig ayaa sheegay in ay Xukuumadda ka mid yihiin oo aysan mucaaradin, balse ay ka shaqeynayaan oo kaliya sixitaanka howlaha dawladda iyo dadaalo ay ugu jiraan sidii meelmar ay uga dhigi lahaayeen qorshaha dawladda.
In lala xisaabtamo Madaxda dawladda Soomaaliya ayuu sheegay in ay tahay arrimaha ay u doorteen Shacabka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in si khaldan looga turjumay oo loo ekeysiiyey in ay ridayaan Xukuumada hadda jirta.
“Maadaama dalkan la rabo inuu horusocod, lagana gudbo nidaamka 4.5, waxaa rabnaa inaan noqono xisbi dalkan ka dhisan, xildhibaan kastana waxaa laga rabaa in labo sano kaddib inuu xisbi ka tirsanaado”ayuu yiri Xidig.
FAAHFAAHINTA DHEERAAD AH RIIX HALKAAN
One Response to WAR DEG DEG AH: Xildhibaan Xidig oo goor dhaw ku dhawaaqay war xasaasi, daahana ka rogay
War hadba qolaa kiraysata, beryahan Gabruu u kiraysnaa.
HALLAGU MUDAAHARAADO, HALLAGA HORTAGO, HALLA CAMBAAREEYO CAADA QAATAYAASHA.